Usetyenziso lweChatroulette lukuvumela ukuba uncokole nabantu abangakhethiyo abavela kumazwe ahlukeneyo.Ingxoxo ikhululekile ngokupheleleyo, awudingi ukubhalisa kuyo, eqinisekisa ukungaziwa ngokupheleleyo.Unokunxibelelana ngemiyalezo ebhaliweyo, okanye ngevidiyo kunye neetshaneli zeaudio.
Ingxoxo engaziwa ngokupheleleyo, ifuna akukho kubhaliswa ngokupheleleyo.Ngokusungula i-app, ungaqala ukuncokola ngoko nangoko.Ukukhethwa kwe-interlocutor kwenzeka ngokulandelelana okungahleliwe.Ukuba incoko ayisebenzi, ngoko ungatshintshela kwi-interlocutor elandelayo ngonqakrazo olunye.Ubuncinci abasebenzisi abangama-200,000 bahlala kwincoko yonke imihla, ke unokuhlala ufumana umntu onomdla.Unganxibelelana ngeaudio kunye nevidiyo, okanye nje ngencoko yombhalo.
Ukugcina ucwangco kwi-ChatRoulette kukho ukumodareyitha.Ukuba i-interlocutor iziphatha ngendlela engafanelekanga, unokuxela oku kumodareyitha, kwaye umsebenzisi uya kuvinjelwa.
Incoko ayaziwa ngokupheleleyo.Uthatha isigqibo malunga nokuba loluphi ulwazi malunga nawe onokuthi uxelele umnxibelelanisi wakho.
U-Onanyugi kunye ne-roulette yokuncokola
Ngowuphi umbuzo ophambili?Njengokuthi kutheni ufuna i-snils?Ndingadibanisa nam-andiyazi ukuba kutheni ifuck ifuneka.
Kukho ityala lokuqhekeza elixoxwayo.
- Ixhoba, unayo umgangatho.Ndixelele ukuba bekunjani.
- Ewe, ndivuke ekuseni, ndagxothwa, (kaloku, ndihlala ndishukuma xa
Ndivuke), ndiye ekhitshini, ndabeka iketile, ndaphuma,
(Ewe, ndihlala ndiphulula amaphambili xa ndibeka iketile).Kulungile, d-hamba uyokuhlamba, thatha
ishawa, i-t-t-mask (kakuhle, ndihlala ndiphulula amaphambili xa ndihlamba).Apha, oko kuthetha
Ndiphume kwishawari, ngequbuliso - kukhala intsimbi emnyango.Kulungile, ndihambe ndayovula
Hayi ke ndaphuma ndahamba, (hayi ke ndimane ndiziphulula amaphambili xa ndiyovula umnyango).
Ndiyayivula- kwaye apho ndine-x-huyaks ngentonga entloko, kulungile, andikhumbuli:
p-p-ingaba ndiphulule amalungu esini okanye hayi.
Ngoko wafumanisa njani ukuba babengamaUkraine?)
Baby, ndixelele umlinganiselo wakho wokukhubazeka.ndixelele imali eqokelelwe kuyo yonke le minyaka yomsebenzi, umrhafi omdaka
Njalo, ndihleli kwi-chat-roulette, ndigcina i-SNILS, ipasipoti, isatifikethi se-2NDFL kunye nesithombe seesile kunye nam, uyazi.Ngequbuliso baya kucela ukubonisa, kodwa andikho ready.PS: Ndiyathemba ukuba zonke ezi clown, apho uPeekaboo ekugqibeleni wajika waba yirhamba le-polytechnic-propagandistic, liya kuvalwa sele lihamba.
Mama ndikwi TV
Imfazwe yolwazi, apha kwi-peek-a-boo yeentombi ezinjalo zamagosa kubumnyama.Uhlala kummandla Zhytomyr, kodwa ixhala Arkhangelsk kunye Novy Urengoy.
Zininzi ke ePikabu.
uCrests wayenokutshintsha ngokukhawuleza umsebenzi.
Hryvnia ukwenza umsebenzi.Njengoko uAristovich wathi: "Ubuxoki yingcamango yelizwe"
Kuba yiloo nto eyenziwa ngamaqhawe
Ilahleko enkulu eluhlaza
Namhlanje, okwesihlandlo sokuqala, wasebenzisa ilungelo lakhe elisemthethweni.Ngemini yomsebenzi ndapakisha ndahamba.kwipaki yamanzi.
Ndakhwela iinduli apho, ndishushu kuzo zonke iindidi zamagumbi aqhumayo, ndaqubha kuzo zonke iindidi zamadama njengetywina, ndihleli nje esitulweni, ndiphunga imorsik.
Iiyure zokuvula, ngoko baninzi abantu.
akukho fowuni, akukho basebenzi, akukho bathengi, akukho nto.
iiyure nje ezimbini zolonwabo.waphumla - njengeveki yeholide.
kwaye konke ngenxa yokuba:
- yonke into ekufuneka ihlawulwe namhlanje - ihlawulwe,
- yonke into ekufuneka inikezelwe - inikezelwe,
-yonke into ekufuneka yenziwe,
Yonke into ekufanele ukuba isemgceni isemgceni.
yonke into iyajikeleza kwaye iyajikeleza, ukuthatha kwam inxaxheba ayikadingeki.
Ndicinga ukuba ndiyifanele.
ndivuyise, kwaye nawe, nawe, ubuncinci ngamanye amaxesha ube nosuku olunje ngesiquphe.
Yiloo nto ke!⁠
Wakhe waphumla kwihotele encinane eYiputa.NgoFebruwari, hayi abantu abaninzi.Ndim kuphela umRashiya.IsiNgesi sam singathanda ukuba ngcono kakhulu, kodwa kukho into eyayisoloko isiphazamisa.Ngokubanzi, ngenye ingokuhlwa ndadibana notatomkhulu onobuhlobo phezu kwekomityi yekofu - wayefike ngqo evela eLondon.Kunye nomzukulwana oneminyaka elishumi elinesixhenxe.Beza kuntywila baphefumle umoya wolwandle.Ngoko ndihleli nalo tatomkhulu, ngandlela-thile ndithetha: njani ubomi, bathi, ngokubanzi, kwaye yintoni ngoku ipensheni eNgilani, njalo njalo?Unqwala ngokukhawuleza, acacise, kwaye ebona ukungaqondi kakuhle ebusweni bam, ngoko nangoko uzama ukucacisa yonke into ngokulula kangangoko kunokwenzeka.Kodwa ngenzondelelo nangaphandle kwesithunzi sempoxo.Yintoni engenakuthethwa ngomzukulwana wakhe.Kwimpendulo yam nganye, wayetsaleleka kummelwane, wayengakwazi ukuhlala nokuluma imilebe yakhe.Ekugqibeleni, emva kokuba enye yeempendulo zam, waphela yintsini.Undijonge ngoxolo utat'omkhulu wabetha umzukulwana wakhe emva kwentloko.Yena, ngokucacileyo wayengayilindelanga loo ndlela yokunganyamezeli kangako imfundo, wadanduluka:
- Kutheni uhleka, Tom?
- Ewe, yena (ukhomba kum) uthetha IsiNgesi ehlekisayo.
- Mxelele ngesiRashiya.
- Intoni!?Njani ngesiRashiya?Ndizothini?Andisazi isiRashiya, tatomkhulu.
- Injalo, wena moron.
Uthumele umzukulwana wakhe egumbini, amxelele ezinye iibhokisi ezintathu.Kodwa uTom wacela uxolo ngaphambi kokuba ahambe.
UCarlson ufikile kwakhona.phambili kwezoqoqosho.Ngorhatya nge-04/26/2022⁠
Ayithethi ngam kunye nezithuba zam kuphela.Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, ezinye iindaba zihambelana nesihloko.
1. Inethiwekhi ye-hypermarkets yokulungiswa kunye nezindlu zasehlotyeni ze-OBI eRashiya ziya kuqalisa umsebenzi weevenkile ukusuka ekupheleni kuka-Aprili.// Isikhundla sezopolitiko sibonakalisiwe.Nangona kunjalo, ingeniso ibaluleke ngakumbi.
2. I-Ofisi yoMphathiswa wezoShishino kunye noRhwebo ilungiselele uluhlu lweemveliso ezithengiswa kumazwe angaphandle ngaxeshanye.// Phantse wonke umntu oshiyileyo ngoku uya kungena eRashiya ngaphandle kwemvume yomnini welungelo lokushicilela.Iipiastres, ii-piastres.
3. ILatvia, iLithuania, i-Estonia iphindwe kabini umbane ovela eRashiya ngo-Matshi.// Kubonakala ukuba, ukuhamba ngokulandelelana kwee-electron kwii-conductors kungaphantsi kwempembelelo yezopolitiko kuneemolekyuli zegesi.
1. U-Xi Jinping uyalelwe ukuba angenele ugqatso lwezoqoqosho kunye ne-United States.// Indoda yathi, indoda iya kuyenza.Iindaba ezilungileyo kukuba ukuze kuphunyezwe umyalelo we-Xi enkulu, i-China iya kufuneka ikhulise imveliso.Kwaye oku uya kufuna izinto zethu ezininzi.Kwaye ewe, oku akusiyo ingxelo.Xi uthe - iChina iya kwenza.
2. IRashiya kunye neTshayina zilungiselele isiseko sorhwebo kwiimali zelizwe.// Idola iya kukhutshwa kwiindawo zokuhlala phakathi kweRashiya neChina.
3. Urhulumente uza kwabela i-ruble eyongezelelweyo eyi-120 yebhiliyoni kuphuhliso lweendlela.// Ngokuqinisekileyo ezi ziindaba ezimnandi.
4. Isigebenga saseFinland sokulungisa amaplanga uStora Enso uthengisa amashishini asarha eRashiya.// Yayiyeyakho - yaba yeyethu.Isaphulelo kwintengiso (inzuzo ngqo yomthengi) - hayi ngaphantsi kwe-70 yezigidi ze-euro.
5. Iibhanki ezininzi ngakumbi eRashiya zingena kwinqanaba elisebenzayo lokulungiselela ukukhutshwa kwamakhadi e-Chinese UnionPay inkqubo yokuhlawula.// Kwaye kuhle.
6. Iingeniso zerhafu kwiinkampani ze-IT zikhule ngeepesenti ze-30 ukususela ekuqaleni konyaka.// Kuhle kakhulu.Ezi ndaba zibonisa ukuba izikimu zaselunxwemeni ze-IT zaphukile, kwaye irhafu yoshishino iyekile ukuhamba ngaphandle.Kwaye oku nangona irhafu ye-IT iyancipha.
7. Umenzi wokutya waseFinnish uValio wathengisa ishishini lakhe laseRashiya, kuquka uphawu lweViola, kwiqela leVelcom.// Yonke into endlwini, endlwini!
1. I-Gazprom" yathi iPoland inyanzelekile ukuba ihlawule igesi ngo-Aprili 26.
2. IPoland yala ukuhlawula igesi yaseRashiya ngeeruble.
3. Inkampani yegesi yasePoland iPGNIG ifumene isaziso esivela kwi-Gazprom malunga nokunqunyanyiswa okupheleleyo kwempahla ukususela ngo-Aprili 27.
4. IPoland yayeka ukufumana igesi yaseRashiya emva kokwala ukuhlawula ngeeruble.
// UqeqeshokwiikatizasePoland ?
1. Khazin: enyanisweni, uqoqosho lwaseNtshona luyintlekele.// Qaphela ukuba andizange ndibhale oku.
2. EJamani, bathi i-Central Banks iya kuqala "ukufihla" i-dollar reserves.// Kwaye baya.
Impahla kunye notshintshiselwano lwemali.I-ruble kunye neoli zilungelelaniswa, igolide iwile kancinane.
Kodwa iimali "ezinzima, eziguqulelwa ngokukhululekileyo" zamazwe "aphucukileyo" ziye zangena kwidiphu.Andiyi kuzisola indawo kwisithuba, ndiya kubonisa imifanekiso.Iishedyuli - ukusuka ku-Agasti ukuya ku-Epreli:
I-Euro: thabatha 12%
Iponti yaseBritani: Minus 11%
Yen yaseJapan: thabatha 16%
I-ruble yokhuni: 0%.Inyaniso yahamba nge-130+.
ICNY.IBhanki Enkulu yaseChina yenza buthathaka kakhulu i-yuan ngokuchasene nedola: ukusuka kwi-6.32 ukuya kwi-6.55.Abahlalutyi abahlukeneyo bachaza izizathu ezahlukeneyo-ukusuka kwi-covid ukuya kwiimpembelelo zangaphandle, kodwa eneneni le nto ayiyonto ngaphandle kwentshukumo eyimfuneko yokunyusa ukukhuphisana kweemveliso zaseTshayina kwimarike yehlabathi-ukwehla kwexabiso lemali yelizwe ukunyusa ukusebenza kakuhle kokuthumela ngaphandle.
Utshintshiselwano lwamasheya, isalathisi se-MICEX.Kujongwe ngezantsi ezantsi, kwaye ngokuzithemba bounced up, ebuyela kwipaseji 2250 - 2750. Kuya kubakho.
Isishwankathelo: kukho imiqondiso emininzi nangakumbi yokuba abo bahambayo baya kushiya ngendlela ephucukileyo, abaninzi abayi kushiya konke.Intlekele ayizange yenzeke.Kwaye akuyi kwenzeka.
Iingcebiso kwabangewona-mali-mali: sigcina imali yemali, songeza i-ruble yamahhala kwidiphozithi okanye ukuchitha.
Umyalezo wabucala:Nceda ungangeni kwiingxoxo ngala magama angundoqo alandelayo:
1. Ikhosi izotyiwe!(Hayi);
2. Uya kuthenga imali eninzi kangangoko ufuna (akukho mfuneko);
3. Amaxabiso aphindwe kabini, ama-curd abe ngama-ruble angama-60!- akukho sizathu sokuxoxa ngamaxabiso abathengi kuze kube yilapho ixesha elivela kwincopho yengxaki liphumile.Siza kuthetha ngamaxabiso abathengi ngoJuni;
4. U-AlexRadio ubhala ukuba yonke into ihamba kakuhle njani nathi, sifanele sibeke izigwebo ixesha elide: hayi, u-AlexRadio ubhala ukuba singcono kakhulu kunokuba besifanele sibe nomthamo onjalo wezithintelo, kwaye kuya kuba ngcono xa sisenza. yintoni ezohlwayo ezisihluthayo .
Yenza isibheno kubageli abaqhekeza kumabonakude waseUkraine
Guys andiyazi ndingadibana nani, ngoku ndibhala apha, ndiyathemba ukuba kukho umntu oza kuyidlulisela kuni.Inyani yokuba unokugqekeza umabonwakude waseUkraineilungilekubi kuba ukuqhekeza kubi.Ewe, ipholile kakhulu, into yokuba ungayenza kufuneka inikwe ngenxa yezinga lakho lolwazi lobugcisa, kodwa kutheni imiyalezo oyipapashayo kumgca wokugijima ingenangqondo?U-Zelensky unikezela, i-referendum yokujoyina iRashiya - akufuneki ukuba ube nguKapteni Kucacile ukuba uqonde ukuba ezi ndaba ziziphumo zomnye ukukhwabanisa.Iindaba ezinjalo aziyi kuchaphazela nantoni na, kuninzi, kuya kubangela ukumomotheka kwelinye icala kunye nokucaphuka kwelinye.Ukuba ufuna ukuba nempembelelo yangempela kubaphulaphuli baseUkraine, sebenzisa iindaba zangempela: amanani elahleko kwicala leMikhosi yaseUkraine epapashwe kwicala laseRashiya, uluhlu lweendawo zokuhlala eziye zafika phantsi kolawulo lweRussian Federation. kunye ne-LDNR, ukuba uMkhosi oxhobileyo waseUkraine ubetha kwizinto zabo zasekuhlaleni, ezinye iindaba ezivakalayo ezinokubangela ukukhula kokutshatyalaliswa.
I-PS: iposi ngaphandle kokulinganisa.
Amaqhawe angaphambili ekhaya
EItali, ungcelele lweembacu zaseUkraine samkelwa ngezikhalo “zamaNazi!”⁠
Inani labantu baseYurophu abaziqonda ngokwaneleyo izizathu zoMsebenzi oKhethekileyo woMkhosi e-Ukraine uyaqhubeka nokukhula.Izizathu zale nto zibabaleki beedemon ezivela e-Ukraine, abanganqikazi ukuhamba ngeedolophu zaseYurophu kunye ne-swastika ye-Azov battalion yesizwe.
Ityalwe kwindawo engalunganga
Kukho umdlalo "Yintoni? Phi? Nini?".Voroshilov:
- Igosa lokhuseleko likarhulumente u-Shcherbakov udlala nathi.Ingqalelo, umbuzo ngulo: "Yintoni ekwinto ye-47?"
Umzuzu wengxoxo uyadlula.Iingcali azinambono;bathatha umzuzu owongezelelweyo, kwaye ekugqibeleni u-Alexander Druz uphendula ngokuthandabuza:
“Asiyazi into ekhoyo apho.
- Impendulo ichanekile.Akunyanzelekanga ukuba uyazi ukuba kukho ntoni na apho.
Ngamanye amaxesha kwanele ukuva ibali lobomi bomntu ukuqonda ukuba ubuncinci obulungileyo.Umntu osebenza naye emsebenzini ukhangeleka njengendoda eqhelekileyo, iqela lingamadoda amaninzi, izihloko zencoko zihambelana - abafazi, amagumbi, iimoto.Kodwa akazange angene kwingxoxo.Awunakwazi ukuba kutheni, kude kube mva nje siye sathetha ngokusuka entliziyweni.Ngapha koko, ngokutsho komlingane, uAndrei.Ndandinohlobo oluthile lobuntwana.UMama weza kusebenza eMoscow, waza wahlala kwigumbi lokuhlala, kunye nodade wabo omdala ezingalweni zakhe.Ndadibana nendoda, yamfudusela kwindawo yayo, baqala ukuhlala, ndazalwa.Utata kwinyanga yesithathu ndisaphila, wathi umntwana ayingowam, sebenza, hamba.Umama wabuyela ehostele, waqala ukufumana imali yokuhlala.Xa ndandineminyaka esi-8 ubudala, udade wethu watshayiswa yimoto waza wafa.Umama ukhubazekile kwaye enyanisweni ndihlala ndingumntu okwaziyo.Wandula ke wasebenza njengompheki kwigumbi lokutyela kumzi-mveliso.Abaphathi baya entlanganisweni, bamshiyela igumbi ehostele elikwimeko yokusebenza njengomcoci.Ndaza ndathatha inyathelo lam lokumnceda.Iminyaka emi-6 yobomi bam yajika yaba lusuku olunye lwe-groundhog - ukuvuka ngo-3 ekuseni, ukucoca iipaseji, iiofisi, ukucoca ikhephu, ukuya esikolweni, emva koko ukuya kukucoca, izifundo, ukulala.Ehlotyeni, ngexesha leeholide, ndazama ukusebenza njenge-loader, i-cleaner, apho bandithatha khona.Emva kwebanga le-9, ndangena kwisikolo sobugcisa, umkhosi awuzange ukhanyise kum - umondli omnye wentsapho, umama ukhubazekile.Ngandlela-thile waqala ukubuyela kubomi obuqhelekileyo, kwaye ndiyakhumbula imini xa, ukususela kumvuzo wokuqala kwiminyaka eyi-16, ndaya ngokuqaphela kwaye ndathenga i-4 kg yeetshokolethi kunye neeglasi ezimbini ze-ayisikrimu.Sasingenako ukuyifikelela.Ngoko ke, xa wabelana ngamabali ebomini nasebuntwaneni - malunga nendlela utata wandibeka ngayo kuqala emva kwevili, umama wathenga iloli yokulahla intle, ugogo wam washiya indlu, yonke intsapho yaya elwandle - andinanto yokuxelela, kwaye hayi kuba ndingumntu ochwechwayo okanye umntu othanda introvert.
Ingxoxo yevidiyo Roulette - umncedisi we-intanethi ekufumaneni abahlobo abatsha
Kwingqalelo yabo bonke abo bavulelekileyo kunxibelelwano!Ngaba ujonge abahlobo abatsha, abangeneleli abanomdla, abantu abanengqondo efanayo?Ngaba uyafuna ukudibana nothando lwakho okanye udlala ngothando?Sebenzisa ngeenjongo zakho isixhobo esikhethekileyo se-Intanethi-iChatroulette!Le nkonzo ilula kwaye iluncedo ayisetyenziswanga ngabantu basekhaya kuphela, kodwa nazizigidi zabantu abavela kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi.Abantu abanomdla wokuthandana bevela eYurophu naseMelika, amazwe angabamelwane, njengawe, sebenzisa ingxoxo yevidiyo ukuze ufumane abantu abafanelekileyo ingqalelo.
Unomzuzu wasimahla.Musa ukumosha!Qhagamshela kwincoko yethu.Chitha ixesha ngendlela eyonwabisayo nenentsingiselo, ngethemba leentlanganiso ezinomdla ezinokuthi kwixesha elizayo zihambe ukusuka kwimowudi ye-intanethi ukuya kubomi bokwenyani.Ingxoxo yevidiyo kunye namantombazana sele incede amawaka abantu ukuba bafumane iqabane lomphefumlo.Emva kwayo yonke loo nto, akukho nto ithintela abantu abathandanayo ukuba batshintshiselane ngolwazi lokunxibelelana ukuze baqhubeke beqhelana ngaphandle kwendawo!
Uyisebenzisa njani incoko yevidiyo yeRoulette
Nawuphi na umsebenzisi we-Intanethi unokuba lilungu leendlela ezimbini zokukhangela abantu abanomdla.Ukubonelela ngomfanekiso wevidiyo kunye nokukwazi ukuqhuba ingxoxo, ikhompyutha kufuneka ixhotyiswe ngezithethi, imakrofoni kunye nekhamera yevidiyo.
Ingxoxo yevidiyo iyafumaneka kubathathi-nxaxheba abangaziwayo: awudingi ukubhalisa kwindawo kwaye ubonise igama lakho lokwenyani!Abanye abathathi-nxaxheba barekhoda umboniso omfutshane wobuntu babo, oku kunceda ukuba baziveze ngeyona ndlela ibalaseleyo.Le ndlela yokwandisa ukusebenza konxibelelwano, kodwa ayifuni.
Ukuqala inkqubo yokukhangela kunye nonxibelelwano, nqakraza nje iqhosha elithi "Qala ukukhangela iqabane".Emva koko, ubuso babantu abatsha abanokubakho buya kuvela kwifestile yencoko.Ungazama ukuqalisa incoko naye nawuphi na umntu omthandayo.Kungcono ukutsiba abantu abangathandekiyo ngokucofa iqhosha elithi "Okulandelayo".
Kufuneka kukhunjulwe ukuba i-Chatroulette ibonelela ngeendlela ezimbini zokufumana abahlobo.Oku kuthetha ukuba abantu ababukele kwisikrini bayakuvavanya kwaye bathathe isigqibo sokuba ngaba ungumntu ofanelekileyo ukuthetha nabo okanye hayi.Ke ungothuki okanye ukhubeke ukuba kukho umntu osuka kuwe esiya kumsebenzisi olandelayo.Lo ngumdlalo nje, amakhulu amawaka abantu athatha inxaxheba kuwo, apho ngokuqinisekileyo kuya kubakho abantu oya kwenza abahlobo nabo.
I-Chatroulette kunye namantombazana sisixhobo sokuzonwabisa kunye nokukhangela ubudlelwane obunzulu
Olu hlobo lonxibelelwano lufanelekile kubantu abaneentloni nabangakwaziyo ukunxibelelana.Emva kwakho konke, akuyena wonke umntu onokulula kwaye ngokwemvelo uqalise incoko nabantu abangabaziyo kunye nokugcina ngobuchule incoko.Ukuqonda ukuba i-interlocutor ikude kwaye wena ngokwakho unokuphazamisa ingxoxo nangaliphi na ixesha ngokucofa iqhosha lizola kwaye linike ukuzithemba.
Kubantu abancinci abathobekileyo, i-roulette yokuxoxa kunye namantombazana yindlela enhle yokuphuhlisa izakhono zokunxibelelana, bafunde ukuziva bekhululekile kwinkampani yabasetyhini, kwaye ngamanye amaxesha baqalise ubudlelwane bokwenene.
Ingxoxo yevidiyo kunye namantombazana inika ukuzithemba kwabafana kuba onke amanenekazi akhoyo kuwo anomdla wokuthandana.Oku kwenza lula umsebenzi kwaye kwandisa amathuba.Kwingxoxo yevidiyo, kufana nobomi: ukuze ukholise intombazana, kufuneka ucoceke, ube nobubele, ube nembeko, ubonise umdla, kwaye uncome.Kwangaxeshanye, kufuneka kukhunjulwe ukuba kungakhathaliseki ukuba ulunge kangakanani, awuyi kukwazi ukutsala bonke abafazi.Kodwa ngaba ufuna yonke into?
Thabatha inyathelo lokuqala.Sebenzisa i-chatroulette ngeenjongo zakho - kwaye ngokuqinisekileyo uya kufumana umntu ofanelekileyo!
Akukho mntu wumbi uya kukucela ukuba ugalele ikofu kwaye uvule ifotokopi, akayi kukubizela isidlo sasemini kwaye akayi kuqaphela umtsalane wakho omkhulu-i-internship ayifani.Ingaba ifomathi entsha isinika ntoni, ukwenza njani impembelelo ngemonitha kwaye ngaba kulula ngokwenene kwi-zoomers kwi-intanethi?Abahlelibe-N + 1, kunye neqonga elithi "iRashiya - iLizwe lamathuba", izazi zengqondo kunye neengcali, zagqiba ekubeni ziqonde isihloko: njani i-internship ngexesha lomsebenzi okude.
Mafia ngu Zoom
I-coronavirus yenze ukuba kube nzima ukufumana ama-internship kule ntwasahlobo: ngokovavanyo lwe-ANCOR, isabelo semibutho ebonelela nge-internship sehle ukusuka kwiipesenti ezingama-66 ngo-2022 ukuya kuma-50 epesenti ngo-2022.
Ezinye iinkampani ziye zanyanzelwa ukuba zicuthe uhlahlo lwabiwo-mali lwabafundi abasaqeqeshwayo: i-18 lepesenti labaqeshi abavavanywayo (kubantu abangama-240) bavumile ukuba bayalurhoxisa uqeqesho ngenxa yobhubhani.Abanye, ngokuchaseneyo, bakwazi ukuziqhelanisa ngokukhawuleza nefomathi entsha - nangona ngokuqaphela.
Ngaloo ndlela, i-Sberbank yazibekela umsebenzi wokuhambisa i-internship yeenyanga ezimbini ze-Sberseasons kwi-intanethi ngelixa igcina umoya weofisi enobungane.Ukuzimanya neqela, inkqubo yohlengahlengiso eyongezelelweyo yaphuhliswa ukulungiselela abaqeqeshwayo.
“Kwiiveki ezimbini zokuqala, saqalisa ukutsalela ngamnye wabafundi umnxeba nangendlela yobuhlobo ukuze sazi enoba basaphila na yaye bafuna uncedo kusini na.NgoLwesine, saqala ukwenza ikhefu lekofu yokwandisa.Sincokole nje, sixoxa ngeencwadi, iifilimu nayo yonke into evuyisa abafundi bethu ngexesha lokufunda, utshilo u-vc.ru eSberbank.
Endaweni yeentlanganiso zobuso ngobuso - udliwano-ndlebe eZoom (ekuthi, ngendlela, zizinyaswe linani elikhulu labaviwa - kwaye ngaphandle kokulibazisa).Ngokomzekelo, i-ATON ifumene inombolo yerekhodi yezicelo xa iququzelela i-internship jikelele "i-ATON ivula iingcango" kubafundi: i-webinar nganye yayizinyaswe ngabantu abamalunga nama-500 ngokomyinge.Emva kwale nkqubo, abathathi-nxaxheba bavavanywa, abangcono bafumene isimemo soqeqesho.
Uthini ummandla wakho
Iingxoxo ngokubanzi, iinkomfa zeaudio kunye nevidiyo, izabelo, ukunika ingxelo, kunye nabahlohli be-intanethi kudala ziyinto eqhelekileyo kweminye imibutho, ngoko ke ukutshintshela kwi-intanethi akuzange kube yinto eyothusayo.Ifomati ye-intanethi ibavumela ukuba bachithe ixesha kumfundi ngamnye.Ngoko ke, udliwano-ndlebe lweqela, oluhlala lubandakanya iphepha lemibuzo okanye ukuqhelana okufutshane nomfaki-sicelo ngamnye (kule fomati, ithuba lokuzibonakalisa lincinci), latshintshwa ngeengxoxo ze-intanethi kunye nabaviwa ababalaseleyo abanomdla ngokwenene ekusebenzeni.Ifomathi ye-intanethi ikuvumela ukuba ngokukhawuleza "ukhuphe izinto ezingafanelekanga" kwaye ugcine ixesha: bobabini abaviwa abangaqinisekanga ngokhetho lwabo, kunye nabameli benkampani.
"Sisebenzisana neprojekthi ye-Internship 2.0 ephunyezwe yiRashiya - i-Land of Opportunity platform kwaye sele siqhuba umsebenzi we-intanethi kunyaka wesibini," utshilo u-Olga Grishina, intloko yeSebe leeProjekthi zeMfundo kwiNgxowa-mali yoNcedo kwiZindlu kunye neZincedisi. Uhlaziyo.— Ngeli xesha, siye saqulunqa izifundo zezifundo ezilithoba kwimiba engumxholo kwicandelo lezindlu neenkonzo zoluntu.Abafundi kunye nabaphumeleleyo banikezela ngezisombululo kwiimeko ezilinganisiweyo: sithatha ababhali bezona mbono zilungileyo zoqeqesho. "
I-Internship 2.0 yiprojekthi yeRussia-Land of Opportunity platform enceda abafundi ukuba bafumane i-internship kwenye yeenkampani ezinkulu zaseRashiya.Ingaba isebenza kanjani?Umqeshi ubeka imisebenzi eqhelanisiweyo (amatyala) kwiqonga leprojekthi.Emva koko umfundi usombulula eli tyala.Iziphumo ezinokuthi zibe sisiseko sephepha lekota okanye ithisisi.Iinkampani zihlalutya kwaye zivavanye izisombululo ezifunyenweyo.Abaphumeleleyo bayamenywa ukuba bazilolonge okanye baqeqeshelwe umsebenzi.Ngomnyaka omnye, amaxesha amabini eprojekthi ayenzeka, iziphumo nazo zishwankathelwa kabini ngonyaka - ebusika nasehlotyeni.
Iingcaphephe zeNgxowa-mali yeZindlu kunye neziSebenzi zoLuntu ziye zaqulunqa imisebenzi ngendlela yokuba imeko nganye intywilisele abaqeqeshwayo kangangoko benako kwi-ajenda yangoku yohlaziyo lwezindlu kunye neenkonzo zoluntu.Umzekelo, abafundi bekude babale isiphumo sokulungiswa okusebenzayo kwamandla usebenzisa imveliso yesoftware yedijithali.
"Ngokuqinisekileyo, kukho iindawo apho i-internship kufuneka ibandakanye ubukho kwiziko kunye nokufunda kwayo, umzekelo, oku kusebenza kwiingcali ezinxulumene nokuhlolwa kwesakhiwo sezindlu ukuze kuchongwe iintsilelo," kusho uGrishina."Nangona kunjalo, njengenxalenye ye-WorldSkills ubuntshatsheli (ekwayinxalenye yeRashiya - iqonga loMhlaba weThuba), enye indlela yokusebenza yacetywayo: uphando lwekhaya elibonakalayo: iiyure ezimbini, abathathi-nxaxheba bafunda into kwi-intanethi, bachonga ukusilela - okwenene. isakhiwo sasisebenza njengomzekelo. "
Abafundi beeyunivesithi zeRiphabhlikhi yaseChuvash, iKrasnodar Territory, i-Ivanovo kunye neVologda Regions baye bafumana i-internship kude kwiNgxowa-mali yeeNkonzo zeZindlu kunye noLuntu.
Uqeqesho olukwi-Intanethi lunika ithuba elihle lokuba iingcali ze-novice ezivela kwimimandla ziziqhelanise.Abaqeshi abaninzi bakhetha bona.Njengoko u-Ekaterina Konopleva, iNtloko yeSebe leeProjekthi eziKhethekileyo zokuPhunyezwa kweSebe lezeSebenzi le-VSK Insurance House, wachaza, abaviwa abanjalo bahlala bekhuthazwa kwaye banomdla emsebenzini.
“Kuthi, esi sisikhokelo sokufumana abagqatswa abavela kwimimandla kunaseMoscow.Sijonge iinkwenkwezi ezisuka kwiidolophu ezincinci, kwaye sibanike ithuba lokujoyina iqela laseMoscow, bazibonakalise kwaye bahlale neVSK, ”wongeze watsho uKonopleva.
Ngaloo ndlela, umfundi ovela eTyumen, u-Angelina Chemurtan, ngenxa yeprojekthi ethi "Professional Internship 2.0", wafumana ithuba lokufumana i-internship ekude ekugxininiseni kwezobuchwepheshe bokunikezelwa kwamanzi kunye nezixhobo zogutyulo kwiSebe lezoKwakha kwi-Russian Federation.
"Ukuba siqhubeka nokuphuhlisa iprojekthi yethu kwaye siyenze, ngoko kuya kwenzeka ukusela amanzi kwipompo ngaphandle kokuhlanjululwa okongeziweyo kunye neenzuzo zempilo," kusho u-Angelina Chemurtan.
Okanye, umzekelo, igqwetha uDanila Avdeev waseVladimir, ophumelele imbasa ye-Olympiad "Ndiyingcali" kumthetho womgaqo-siseko, wagqiba i-internship kurhulumente waseSt. Petersburg - ukudala inkonzo yolwazi kubaviwa benkonzo yoluntu.
“NdiyiNgcali” yiOlympiad yemfundo enomgangatho omtsha wefomathi entsha yabafundi beengcali ezahlukeneyo.Imisebenzi yabathathi-nxaxheba iqulunqwe ziingcali ezivela kwiiyunivesithi eziphambili zaseRashiya kunye neenkampani ezinkulu zelizwe.Asiyo-erudition engabonakaliyo evavanywayo, kodwa ulwazi lobuchwephesha.Abona bathathi-nxaxheba babalaseleyo bafumana ithuba loqeqesho kwiinkampani ezinkulu kunye nabasemagunyeni.I-Bachelor's, ingcali kunye nabafundi beenkosi banokuthatha inxaxheba.
“Bekunomdla kum ukuba ndiqhelane nezinto ezikhethekileyo zokusebenza kwenkqubo yenkonzo karhulumente yaseSt. ndisafunda kwaye ndiyasebenza, ngoko ke ukufuduka bekungenakwenzeka.Ke, enyanisweni, kulo mba, ubhubhane undivulele amathuba amatsha, ”utshilo uAvdeev.
Ubhubhane uya kudlula, izakhono ziya kuhlala
Ukwaphawule ukuba ifomathi ye-intanethi luqeqesho olugqwesileyo lwezakhono zokusebenzisana ezikude, umzekelo, ukusebenzisa iTrello kunye noGoogle Dibana: ubhubhane uya kudlula kwakamsinya okanye kamva, kwaye ezi zakhono ziya kuza ngokufanelekileyo.Ukongeza, ngokuka-Avdeev, i-internship ye-intanethi ibandakanya ukusebenza ngakumbi kunye nokubandakanyeka kwinkqubo yomsebenzi.
“Kwimibutho emininzi, i-internship ngumsebenzi onomatshini wekofu kunye nefotokopi: qamba, printa, uze.Xa yonke le "midlalo yeofisi" ingena ngasemva, imisebenzi iba yinto ethe ngqo.Ke, besinemisebenzi engakumbi yokuyila kwi-intanethi: siye savelisa i-bot yencoko kwiTelegram yokunxibelelana kwabazingeli nabagqatswa kwizikhundla kwiiarhente zikarhulumente, ”ukhumbula uDanila nge-internship.
Ngokutsho kophando lwe-Intern Bridge, emihlanu, emithandathu, kwiminyaka esixhenxe eyadlulayo, abaqeshi baqesha ama-intern ikakhulu ukwenza umsebenzi olula, weofisi, ukuba abe ngumncedisi.Ngoku ingqwalasela itshintshele ekuchongeni italente yexesha elizayo.
Abathathi-nxaxheba be-intanethi ye-internship kwi-ConsultantPlus baphinde bakhetha ithuba lokuthatha inxaxheba kuphuhliso kunye nesisombululo samatyala okwenene phakathi kweebhonasi eziphambili ze-intanethi.
“Ndikuthandile ukwenza uhlalutyo lwezona zixhobo zenkqubo ye-ConsultantPlus kunye nabo bakhuphisana nabo, nokucinga ngeendlela zokuphucula imveliso.Yile nto endinomdla kuyo ngokunyanisekileyo, utshilo u-Anton Filatov, othatha inxaxheba kwi-internship, umfundi we-RANEPA.
Imisebenzi yabasebenzi abasafundayo yayiquka ukusebenza kwiprojekthi kunye nokugqiba umsebenzi ngamnye ngokuzimasa uqeqesho neentlanganiso ngexesha elimisiweyo.Usuku lwaqala ngoqeqesho kunye neentlanganiso ze-intanethi.Emva koko abathathi-nxaxheba kwiqela baxoxe ngeprojekthi kwaye basebenze kwizabelo zomntu ngamnye.
“Ucwangciso lwaluxinene.Ngaphandle kwexesha elimisiweyo leeklasi ukususela ngo-10:00 ukuya ku-14:00, kwafuneka ndibambezele.Nangona kunjalo, kulungile ukuba ufuna ukuphumelela.Ngaphandle koko, inomdla, ”wongeze uFilatov.
Ukusebenza kude kunye ne-internship konga imali yokuhamba kunye nesidlo sasemini seofisi kwaye kucuthwe ixesha elidla ngokuchithwa kunxibelelwano olungelulo umsebenzi (udlula iingxoxo eziqhelekileyo kunye neengxoxo zezicwangciso zempelaveki ngexesha lekhefu lekofu).Le fomati ivumela ugxininiso kwimisebenzi ethile, kodwa kwangaxeshanye ikhokelela ekuzihlukaniseni ngakumbi komqeshwa / umqeshwa kwaye, ngenxa yoko, kukhokelela ekubeni ube nesithukuthezi.Kwaye isizungu sibulala ukubandakanyeka kwinkqubo kunye nokukhuthaza.
Esi sisigqibo esifikelelwe ngumbhali waseMelika kunye nomphandi uDan Schawbel kwintengiso yakhe entsha Buyela kuMntu: IiNkokheli eziNkulu ziDala njani uQhagamshelwano kwiXesha lokuzahlula.
UShavbel wenze udliwanondlebe neenkokeli eziselula ezili-100 eziphuma kwiinkampani ezifana ne-Facebook, Google, Uber, Nike kunye neWalmart kwaye wabuza malunga nezimo zabo zengqondo malunga nefomathi ye-intanethi kunye neteknoloji ekuhambeni komsebenzi.Inkampani kaSchawbel, iFuture Workplace, isebenzisana neVirgin Pulse ukwenza uphando ngabaphathi nabaqeshwa abangaphezu kwama-2,000 kumazwe ali-10.
Ngubani ngokwenene olilolo emsebenzini?Uphononongo lubonise ukuba amanye amaqela adinga kakhulu intsebenziswano kunamanye.Umzekelo:
Amadoda (ama-57 ekhulwini) aziva enesithukuthezi emsebenzini ngaphezu kwabasetyhini (ama-43 ekhulwini)
Ama-Introverts (ama-63 ekhulwini) aziva enesizungu emsebenzini ngaphezu kwe-extroverts (i-37 ekhulwini).
I-Gen Z (ipesenti ze-45) kunye ne-millennials (i-47 ekhulwini) baziva benesizungu emsebenzini ngokuphindaphindiweyo kune-Gen X (i-36 ekhulwini) kunye ne-Baby Boomers (i-29 ekhulwini).
Ngokutsho kwengqondo yengqondo u-Olga Batueva, kukho inkolelo eqhelekileyo yokuba kulula kwisizukulwana se-zoomers (iGeneration Z - abantu abazalwa phakathi kwe-2022 kunye ne-2022) ukulungelelanisa kwifomathi ye-intanethi.Nangona kunjalo, oku akuthethi ukuba kukhululekile kwaye kuluncedo kubo ukuba basebenze kule ndlela.
Inguqulelo ye "chatroulette" in Arabic
I-Omegle, i-Ometv, kunye neesayithize-chatroulette zezona ndawo zingcono ze-chat sites eziya kukunceda udibanise nomntu ongamaziyo onokuthi ube nencoko yodwa.
I-Omegle, i-Ometv, kunye ne-Chat roulettesites zezinye zeesayithi ze-chat random ezikunceda ukuba udibanise nomntu ongamaziyo onokuthi ube nencoko enye ukuya kwenye.
Thetha nge-roulette yengxoxo engakhethiyonjl.naphi na e-UK, awukwazi ukuphuma ngokulula ngaphandle nangaliphi na ixesha ngeeselfowuni kunye neeselfowuni.
Thetha nge- roulette yengxoxoengahleliwekunye nokunye.naphi na e-UK awukwazi ukuhamba ngokulula ngaphandle nangaliphi na ixesha ngeeselfowuni kunye neeselfowuni.
Xa eli candelo licofa, amantombazana amahlechat rouletterandom chat page iya kuqalisa ukuvula ikhamera kuwe.
Xa eli candelo licofa, amantombazana amahleChat RouletteRandom Chat page uya kuqalisa ukuvula ikhamera kuwe.
Le mizekelo ijolise kuphela ekuncedeni ukuguqulela amagama aphengululweyo kunye namabinzana kwiimeko ezahlukeneyo.Asikhethi okanye sixhasa imizekelo, kwaye isenokuba namagama okanye iingcamango ezingafanelekanga.Nceda usazise ngemizekelo ocinga ukuba kufuneka ilungiswe okanye isuswe.Iinguqulelo ezirhabaxa okanye zentetho eqhelekileyo zidla ngokuphawulwa ngombala obomvu okanye orenji.
Ndibuyisele u-2022 wam.Indlela i-chatroulette itshintshile ngayo kwaye kwenzekani apho ngoku
Kwiminyaka elishumi edlulileyo, unokukhomba nabani na umnwe wakho kwaye uthi ngokuzithemba: "Oh, ndikubonile kwi-roulette ye-chat!", Emva koko ujonge indlela umntu odidekile ngayo ozama ukuqonda ukuba uyadlala okanye awukho.Ngelo xesha, kubonakala ngathi bonke oontanga bam bebesazi ngale ncoko yevidiyo.Izithunywa eziphathwayo zazingekabikho, iinethiwekhi zentlalo zazisebuntwaneni, ngoko ke ukungabikho konxibelelwano kwenziwa kwiincoko ezingapheliyo zobusuku kunye nabantu abangabaziyo abavela kwihlabathi liphela.
Ndagqiba ekubeni ndibuyele kwi-chatroulette.com emva kweminyaka emininzi ukuze ndibone okwenzekayo apho kunye nendlela abaphulaphuli bayo batshintshile ngayo.
Utshintsho lwaqala "ukusuka embundwini" - uyilo lwengxoxo luye lwahluke ngokupheleleyo.Akusekho iqhosha elidumileyo "elilandelayo", lithatyathelwe indawo ngu "skip", onomsebenzi ofanayo.Kwakukho nokhetho ukuba ufuna ukujonga umtsalane ophambili we "roulette" - amadoda aphulula amaphambili.Kodwa ngesizathu esithile, umbuzo othe ngqo wawugqunyiwe, unikezela ukuba ukhethe ukuba kutheni uye kwindawo: ukuncokola nje okanye ukulungele ukuntywila enzonzobileni ye-Intanethi engalawulwayo.Njengoko kuvela, ayichaphazeli nantoni na.
Oyena mntu wokuqala endithetha naye endiye ndadibana naye kwincoko ephawulwe “Indawo eyonwabisayo yokuxoxa phantse ngaso nasiphi na isihloko.Yigcine icocekile (Indawo enomdla yokuxoxa malunga naso nasiphi na isihloko. Yiba nesidima) ", wabonisa inxalenye engezantsi yomzimba kwaye, njengokungathi ubanjwe yi-epileptic, ngokukhawuleza wakhupha i-genitalia yakhe yangaphandle.Ukugqiba ukuba asiyi kukwazi ukuba nemveliso - kunye nokuzala - unxibelelwano, "ndiyitsiba" ngesazela esicocekileyo.Ngamafutshane, iminyaka iyahamba, kodwa akukho nto iguqukayo.
Xa i-Chatroulette yayikwincopho yayo, i-website ye-Mashable ipapashe izifundo eziye zagqiba ukuba i-14% yabasebenzisi be-chatroulette baphulula amaphambili phambi kwekhamera yewebhu.Kuvakala ngathi zininzi kakhulu - phantse kwisithathu ngasinye.Mhlawumbi sasisoloko sinethamsanqa, okanye izifundo azichanekanga kakhulu.
Amantombazana akhalaza ngokukodwa ngale nto: ngokweziqinisekiso ze-interlocutor yam engahleliwe, ngeyure ndinguye kuphela umntu owaneleyo ongazange ambonise nantoni na engafanelekanga kwaye akazange azame ukumcenga ukuba abe neentlobano zesini.Kuyinyaniso, emva kwemibuzo engagqibekanga "Unjani?"yaye “Wenza ntoni?”, incoko enentsingiselo yoma ngokukhawuleza.Andicingi ukuba nditsho, kodwa mhlawumbi yayikungafuni ukunxibelelana kwinkonzo yonxibelelwano eyabangela ukuba oogxa bakhe bangaphambili bajonge indlela yokuphuma kwimeko, eyajika yaba yi-banal.
Kodwa unxibelelwano ngokwenene aluzange lubambelele.Abantu abalalayo babethe nca esikrinini rhoqo emva koko, ababengena kwincoko ngaphambi kokuba balale kwaye kubonakala ngathi ulibele ukuyicima ikhamera yewebhu.Amadoda anomdla ngakumbi ekunxibelelaneni namantombazana, ngoko kwiimeko ezininzi ayandivumela ukuba ndidlule, kwaye abo bangazange bandivumele ukuba ndingene benza izinto ezahlukahlukeneyo ezingayibandakanyiyo ngokucacileyo incoko.Umzekelo, malunga nemizuzu emihlanu ndibukele indlela enye indoda eyayineminyaka yayisonga iitapile eziphekiweyo kunye ne-herring kwindawo yendlu yelali yaseRussia, kwaye ayizange isabele kwaphela kwizandi zencoko.Mhlawumbi yayiyimidlalo edlalwa ndedwa endingazange ndiyixabise.
Ngendlela, enye inguqu ebalulekileyo eyenzeka kwi-chatroulette: ngaphambili kwakunokwenzeka ukukhetha ubulili kunye nobudala be-interlocutor (ngokubhalisa okuhlawulwayo), kodwa ngoku akukho nto enjalo.Ngoko ke, kubafana, ithuba lokunxibelelana nesini esahlukileyo ngokukhawuleza liba ngu-zero, kwaye ngokwenene abaninzi babo beza apha.Ngenxa yoko, ukuncwasa okunokubakho kwi-Intanethi kuguqukela ekubeni lukhangelo oludinayo kangangeeyure ezininzi.
Nangona kunjalo, kukho abo bachasene nonxibelelwano "oluqhelekileyo".Okumangalisayo kukuba, omnye wabangeneleli bam abanomdla uye waba libanjwa langaphambili.Wathetha ngendlela awayehleli ngayo (okanye, ngamazwi akhe, “ukukhonza”) igama eliphantsi kwenqaku le-159 le-Criminal Code ye-Russian Federation ngobuqhetseba, malunga nobuntwana bakhe obungenamsebenzi kunye nento emenza ukuba angaphinde abuyele kumfazi wakhe. kunye nentombi encinci.Malunga nendlela yonke into esebenza ngayo entolongweni kwaye kutheni, ngokomzekelo, kukhululekile ukuhlala kwingingqi yaseNovosibirsk kunengingqi yaseTomsk.Malunga nendlela afuna ukuzakhela ngayo eyakhe indlu, aqale ifama encedisana nokupheka itshizi.Wade wabonisa iitattoos zakhe - iirozi zomoya kwiikhola nasemadolweni.Kwimeko yokuqala, bathetha, njengoko watshoyo, ukuba "akayi kuphinda afake i-epaulettes yamapolisa", okwesibini - "akayi kuguqa phambi kwamapolisa."
Ngokubanzi, incoko enomdla kakhulu yaphuma, eyaphazanyiswa libinzana lomfazi wakhe: "Oleg, b ****, wena s***al, masilale."Ngamazwi athi "I'm sorry, zay" uye waqhawula.Mhlawumbi u-Oleg wacela uxolo kum - ngubani owaziyo.
Kwakukho nentombazana enekamva elinzima, owazala eneminyaka eyi-14, ehlala "ekhupha" kwaye apho kwakukho incoko engathandekiyo malunga nokuba ngumama wokuqala.
Abafazi abangatshatanga baseCaucasus, malunga neminyaka engama-50 ubudala, abathi, ngenxa yesizathu esithile, ekuphenduleni ingxelo yam yokuba iPyatigorsk isendaweni ethile kufuphi neKabardino-Balkaria, yavutha ngumsindo kwaye yaqala ukukhwaza ukuba le nto yayingekho, kodwa andiyiqondi nantoni na. kwijografi.Ingcinga yokugqibela yinyaniso yamanzi ahlambulukileyo, ngoko, ndibakholelwa, ndagqiba ekubeni i-google kwaye kwavela ukuba amanqaku amabini kwimephu ahlukaniswe ngeekhilomitha ezilikhulu kuphela.
Indoda enxile kakhulu neyandiqaphela njengowayesakuba ngugxa wayo uSeryoga.Indoda enxila ngokulinganiselweyo, amehlo ayo ayenamanzi kwaye yabonisa ukuba "amadoda awalili."
Abasemzini nabo bawela, kodwa kunqabile, kwaye ngenxa yesizathu esithile, akukho namnye kubo owayenomdla eRashiya-kunye neSiberia ngokukodwa - kwiminyaka elishumi eyadlulayo.Mhlawumbi udlisiwe.
Ngokubanzi, iiyure ezimbalwa endizichithe kwincoko zazibonakala ziyindinisa kum.Andazi ukuba isizathu sikum, kuba ndikhulile kwaye ndaphulukana nomdla wam wangaphambili wokunxibelelana nabantu abangabaziyo kwi-Intanethi.Okanye abantu ngokwabo baye baba yinto ekruqulayo ngakumbi - babonakala belindele ukonwatyiswa, ngokungathi beze kuhlobo oluthile lwentsebenzo ye-intanethi, ngelixa bengafuni ukunika nantoni na ngembuyekezo.
Kodwa "i-fallow-traveller syndrome" isasebenza: ukuba ufumana umntu oya kukuphulaphula, unokusindisa kakhulu kwi-psychologist.Ngesizathu esithile, bendisoloko ndinjalo.
I-roulette yengxoxo yevidiyo yinkonzo eluncedo yokuthandana kwi-intanethi
Nabani na onqwenela ukuba nobudlelwane obutsha, ufuna ukuthetha ngezihloko ezinomdla, ukwenza abahlobo, ukuhlangabezana namantombazana, kufuneka azame indlela elula nefanelekileyo yokuthandana kwi-intanethi - incoko ye-roulette.Esi sixhobo sikhethekileyo sibonelela ngokufikelela kwizigidi zabasebenzisi be-Intanethi abanomdla kunxibelelwano olunomdla, uthando kunye nobuhlobo njengawe.Ukukhethwa kwe-interlocutor kwenzeka ngokuzenzekelayo, ingaba ngumntu ovela eRashiya, eBelarus, eJamani, e-USA nase-Australia.
Incoko yevidiyo kunye namantombazana ivumela abafana ukuba baziqhelanise nezakhono zokunxibelelana nabantu besini esahlukileyo kwaye benze iintombi kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi.Kukho ithuba eliphezulu lokuba phakathi kwaba interlocutors random kuya kubakho imimoya ehlobene.I-Chatroulette kunye namantombazana ngumncedisi othembekileyo ekufumaneni iqabane lomphefumlo wakho!
Isebenza njani i-roulette yengxoxo yevidiyo
Nabani na onekhompyutheni exhotywe ngekhamera yevidiyo, i-microphone kunye nezithethi banokufikelela kunxibelelwano lwe-intanethi ngaphandle kwemida.Ngapha koko, sesi sixhobo esenza kube lula ukusasaza umfanekiso wevidiyo kunye nokuqhuba incoko.
Akuyimfuneko ukucacisa igama, kodwa ingxoxo yevidiyo inikezela ngamathuba amaninzi kubasebenzisi ababhalisiweyo kunabo bangaziwa.Ukuzibonakalisa ngokukhanya okuhle, kuyacetyiswa ukuba urekhode ividiyo emfutshane eyamkelekileyo.
Ngokucofa iqhosha elithi "Qala uPhando", ngokuzenzekelayo uba lilungu lenkqubo.Umfanekiso we-interlocutor enokwenzeka uvela kwifestile yengxoxo yevidiyo: ubona kwaye uva umntu, uyakubona kwaye uyakuva.Ukuba ubuntu be-interlocutor bubonakala bungathandeki okanye bungathandeki kuwe, cinezela iqhosha elithi "Okulandelayo" kwaye uqhubekele kumntu omtsha.
Ziziphi izibonelelo ze-roulette yengxoxo yevidiyo
Okokuqala, incoko yevidiyo sisixhobo sokufumana abantu abatsha obaziyo kunxibelelwano olumnandi, olukhululekile.Iinjongo zokusebenzisa inkonzo yethu kumntu ngamnye zinokwahluka.
Ukoyisa iikhompleksi.Iintloni kunye nokungabikho kobuchule bokunxibelelana kwenza ubomi bube nzima kakhulu.Incoko yethu yevidiyo inceda ukuzithemba, ukufunda ukungena ngokulula kwincoko, ukugcina incoko nabantu ongabaziyo kunye nokudlala ngothando.Ukuqaphela ukungaziwa, ukuhlukana kwi-interlocutor ngesikrini sokubeka iliso, kunye nokukwazi ukuphazamisa ingxoxo nangaliphi na ixesha ukunika imvakalelo yokhuseleko kwaye kukuvumela ukuba uzive ukhululekile kwaye ukhululekile.
Ukufumana isibini.I-Chatroulette kunye namantombazana ikunika ithuba lokuqalisa ukungabizi, ubudlelwane obumnandi be-intanethi, uphuhliso oluya kuxhomekeka kuwe kuphela.Mhlawumbi niyathandana kangangokuba nigqibe kwelokuba nincokole ngaphandle kweintanethi.Kwabaninzi, incoko yethu yevidiyo ibe yindawo yokuhlangana enothando lokwenyani.
Inkxaso yengqondo.Ngexesha elinzima, xa kungekho mntu umthandayo kufuphi, akulula ukujamelana neengxaki eziye zafumba ngokwakho.Kwiimeko ezinjalo, kwanomntu ongaziwayo unokuthulula umphefumlo wakhe, kwaye inkxaso yokuziphatha kunye neengcebiso ezilungileyo kumntu ongaziwayo zinokuba luncedo kakhulu.
Ubafumana njani abahlobo abatsha kwi-chatroulette
Kulula ukuqhelana, ukuqhuba iincoko, ukuqalisa ubudlelwane kwincoko yevidiyo.Musa ukucaphuka xa u-interlocutor ephazamisa incoko kuqala: akunakwenzeka ukukholisa wonke umntu.Ingxoxo yethu yevidiyo kunye namantombazana ikunika ithuba lokunxibelelana namawakawaka abantu.Zama ukujongeka unobubele, ucocekile, unobuhlobo, unobuqili, ubeke ingqalelo kwi-interlocutor, kwaye ngokuqinisekileyo uya kudibana nomntu onomdla onyanisekileyo kuwe.
Yiba nobudlelwane, unganqikazi ukuba ngowokuqala ukunxibelelana - kwaye abantu abatsha abanomdla nabaluncedo baya kuvela ebomini bakho!
Iinkcukacha: I-Porn Chat Roulette kunye namantombazana: i-sex dating 18+
I -roulette yokuxoxa ngesondo ayisiyondlelakuphela yokuphepha isithukuthezi xa kukho ukuvuseleleka okunamandla ngokwesondo, kodwa ukukwazi ukufumana amantombazana amaninzi abalulekileyo okanye abafana abasuka kumakhulu abangeneleli abangahleliweyo bokuthandana kunye nokuncokola, ukuphulula amaphambili okanye ukwabelana ngesondo phambi kwekhamera yewebhu.Ngaphandle kwamathandabuzo, ihlabathi lanamhlanje, elizaliswe yi-Intanethi, libonise uluntu ngobuninzi betekhnoloji kunye nokuzonwabisa, kwaye lenze ukuba kube nokwenzeka ukubandakanyeka kwi-pickup ngqo kwingxoxo yevidiyo.Ngaphezu koko, zonke iindawo zonxibelelwano ngesondo kwi-intanethi zaqala ukukhula, kuquka ne-BDSM yesondo kunye nayo yonke imigangatho yayo, kwaye amantombazana kwiikhamera zewebhu ezivuselelayo afunda ukufumana i-orgasms kunye ne-squirt kwikhamera yewebhu, kanye emoyeni!
Yonke intombazana ifuna umfana omnye ukuzalisekisa yonke iminqweno yakhe, kwaye wonke umfana ufuna ukuba onke amantombazana azalisekise umnqweno wakhe omnye.
Hamba phambili, kwi-portal ye-RuFreeChats, iindwendwe zikhululekile ukwenza nantoni na eziyifunayo, kwingxoxo ungabonisa yonke into, iindwendwe ziba iingcamango, iminqweno kunye neemvakalelo.Kuphela apha - ukhetho olukhulu lweengxoxo - ungakhetha ngokuzimeleyo imodeli oyithandayo phakathi kwenani elikhulu leeprofayili ezikhoyo, ezihlelwe ngokwamacandelo ahlukeneyo kunye neentlobo, okanye uye kule ngxoxo ye-intanethi yabangeneleli abasondeleyo, khetha umviwa omthandayo kwaye uqale. ukonwaba ngoku.I-portal yethu yengxoxo ifumaneka ngewashi, kwaye nokuba ufanele ubhalise okanye ungayibhalisi, zenzele isigqibo, ngokubanzi, cinga kwaye ujoyine i-sex resource ngokushushu, kwaye okona kubaluleke kakhulu, amantombazana okwenene kunye nabasetyhini phambi kweekhamera zewebhu.
I-Web pickup: incoko yevidiyo ye-porn kunye ne-interlocutor engakhethiyo yokuthandana ngesondo ngokuphila
I-roulette yengxoxo yevidiyo yabantu abadala, apho unokubonisa yonke into kunye namantombazana kunye nabafana, abafazi okanye amadoda!Kuluntu lweRuFreeChats.com lwe-porn chat voyeurs kunye ne-exhibitionists, isondo kwi-net asikho into entsha ixesha elide kwaye akuyona into enyanyekayo okanye eyoyikisayo, kuba abantu abaninzi baye basebenzisa ixesha elide kwaye banelisekile.Ziziphi iingenelo zokuphulula amalungu esini kwi-intanethi kunye neenkonzo zokuzonwabisa kumaqela omabini?
-Zibandakanya kwi-pickup ebonakalayo kwimodi ephilayo ngoku, phucula izakhono zakho zokuhenda kunye nabanxibelelanisi bokwenyani;
- i-roulette ye-sex 18+ inika iimvakalelo ezintsha, akukho mntu unokuqikelela kwangaphambili ukuba yeyiphi intombazana okanye umfana, umfazi okanye indoda eya kujoyina;
- kwi-roulette yengxoxo wena ngokwakho ubeka imida yonxibelelwano kwikhamera yewebhu, unokubonisa yonke into ngokupheleleyo;
-kwincoko yevidiyo evuselelayo kunye ne-interlocutor engacwangciswanga, wena ngokwakho ukhethe i-interlocutor ngokokhetho lwakho ngokucofa iqhosha elithi "Okulandelayo" ukuba unxibelelwano nomntu othile aluzange luphumelele.
Porn Roulette: umahluko kwezinye izingxoxo 18+
Incoko yevidiyo kunye neemodeli zewebhu zewebhuUkuncokola rhoqoNcokola Roulette 18+
Unokunxibelelana neemodeli zewebhu zewebhu, ukubona i-interlocutor yakho kwangaphambili
Unxibelelwano lweWebcam enezithintelo, ukuvalwa kwe-18+ kwaye akukho kuhluthwa kwikhamera yewebhu
Ngokucofa ngokulula, ukhetha i-interlocutor engalindelekanga kwangaphambili ngokumisela isini esifunwayo somfokazi kunye nohlobo.
Iimodeli zenza i-masturbate kwi-webcam, zingayenza kwingxoxo ngokubanzi, imodi yeqela okanye ngasese
Unxibelelwano nabantu bokwenyani abanokuba ngabasasazi abaqhelekileyo okanye iibhlogi
Ukwazana kunye nokwabelana ngesondo ngenyani nomntu ongamaziyo, ngaphandle kokuvalelwa kunye nezithintelo ezinzima
I-avareji yenani leemodeli zewebhu zewebhu kwi-intanethi: malunga ne-3000
Uninzi lwamanani amancinci, bobabini abatyeleli kunye nabasasaza
Kwingxoxo yezesondo kunye ne-interlocutor engahleliwe, kunzima kakhulu ukubala ukuba bangaphi abantu ongabazi onokudibana nabo
Iminyaka eyahlukeneyo kunye neentlobo: ukuhamba ngokulula kunye nokukhetha ngokweempawu, izinto ezikhethwayo
Ubudala ubukhulu becala bungaphantsi kwe-18 (abancinci kunye nabafikisayo), iibhlogi kunye nabasasazi abangaphezu kwama-30+
Ngokuqinisekileyo nayiphi na iminyaka yabantu random abafuna ukuthandana eqhelekileyo kunye neencoko 18+ kwi webcam
Ngokwezibalo, uninzi lwabasebenzisi bencoko evuselela inkanuko - malunga ne-50% - amakhwenkwe kunye namantombazana aneminyaka eyi-18 ukuya kuma-35, abasetyhini kunye namadoda angaphezu kwama-35+ - kunye ne-50%
Uluhlu lweendwendwe kwiingxoxo eziqhelekileyo ukusuka kwi-10 ukuya kwi-18 iminyaka ubudala malunga ne-32%, ubudala 45 + - 68%
Iindwendwe - malunga ne-40% - amadoda amadala angaphezu kwama-35 +, malunga ne-20% - abafana (18-25 +) kunye ne-35% - amantombazana aneminyaka eyi-18 ukuya kwe-24, abanye ngabasetyhini abaneminyaka yobudala.
Chat Roulette - lixesha lemidlalo ebonakalayo phambi kwekhamera yewebhu nomntu ongamaziyo onomtsalane
Ukuba unesithukuthezi ngonxibelelwano oluqhelekileyo kwi-roulette yengxoxo elula, ngoko lixesha lokuzonwabisa lokwenene, isondo esibonakalayo phambi kwekhamera yewebhu kunye nomntu ongaziwayo ngokupheleleyo ngaphambili.Iimodeli ze-sultry: amantombazana aselula aneminyaka eyi-18+, abafazi abadala abaneminyaka engama-25+ kunye nabasetyhini abadala abangaphezu kweminyaka engama-35+ abayi kukuvumela ukuba ube nesithukuthezi kwaye ube lusizi kwincoko yethu yevidiyo yaseRussia kunye ne-interlocutor engahleliwe.Amanenekazi aselula avuselela iwashi aziphatha ngokukhululeka kakhulu, xa abaphulaphuli babo bekhululwe.Ngenkangeleko yabo entle, ubuhle bewotshi bayakwazi ukubavuyisa kakhulu amadoda kunye nabasetyhini besini sabo.Ewe kunjalo, incoko yevidiyo ekwi-Intanethi ivusa umnqweno omkhulu osondeleleneyo-ukuphuma kwikhamera yewebhu.Iimodeli zewebhu ezikhohlakeleyo zeXXX ezinobuso obuhle kunye namanani abhityileyo aziphatha kakubi kakhulu, kuba akukho zithintelo kumxholo wonxibelelwano kwincoko,I-roulette evuselela inkanukoyemidlalo esondeleyo kwi-intanethi kunye nokuvalwa kokutyelelwa ngabantwana.
I-roulette yengxoxo ye-porn inika ithuba elihle lokuqhelana kwi-intanethi, ngoko nangoko ngendlela ye-interlocutor yakho kwikhamera yewebhu..Ngovuyo olukhulu, amantshontsho amancinci naqolileyo anikezela ngesondo esibonakalayo esipholileyo phambi kwekhamera yewebhu ngendlela yomntu omnye.Ukufuna ukonwabisa iqabane ngokukhawuleza kwaye ngamandla kangangoko kunokwenzeka, abadlali beqonga abakhohlakeleyo baqala ukutyhefa amabali ahlukeneyo angeyonyani.I-roulette yevidiyo yokwabelana ngesondo kunye namantombazana alishumi elinesibhozo kunye iyathandwa ngabo bonke abathandi be-Wirth kunye nokuziphatha okubi bahlala kunye neemodeli ezingezona zobugcisa.Amantombazana adlalayo abeka iikhamera zabo eziphilayo ngendlela yokuba phantse nawuphi na umbukeli unokubona ngokulula zonke iikharethi zabasetyhini ngokweenkcukacha ezinkulu.Le ngxoxo yevidiyo kunye namantombazana, kufuneka ukhethe intombazana oyithandayo kwezo zinikezelwa ngokungenamkhethe yinkqubo ngokwayo kwaye ujabulele imiboniso epholileyo ephilayo okanye uxoxe nje ngezihloko zemihla ngemihla.Ngokwenyani, ukuba unqwenela, ungabhalisa, konke oku kusimahla,
Incoko ye-porn roulette 18+ ene-interlocutor engacwangciswanga, izibonelelo ze-intanethi:
i-intlocutor kunye ne-interlocutor engakhethiyo, awukwazi ukuba ngubani oza kuvela phambi kwakho kwelinye icala lesikrini;
oku akukhona nje ingxoxo yokunxibelelana okubhaliweyo okanye ikhamera yewebhu ukuthandana , kodwa inkomfa epheleleyo kunye nabantu bokwenyani - incoko apho unokubonisa yonke into;
iya kunika ithuba lonxibelelwano olunomdla kunye nokhululekileyo kunye namantombazana angaqhelekanga okanye abafana bezizwe ezahlukeneyo;
iya kukunika ithuba lokufumana imbonakalo eninzi engakholelekiyo ngexesha leeprank ezifanayo kwikhamera yewebhu kwimowudi engaziwa;
iya kukuvumela ukuba utshintshe amava ngesondo kwaye ukonwabele ixesha lokuzilibazisa elidibeneyo kunye nonxibelelwano kwikhamera yewebhu kunye ne-interlocutor engahleliwe;
iya kunika ithuba lokuchitha iyure enomdla yamahhala kwinkampani yeqabane elishushu okanye i-macho enomdla.
Qala ubomi obutsha kwincoko yevidiyo ye-porn ebonakalayo ngoku!Ngokomzekelo, amantombazana ngokwawo e-RuFreeChats.com i-web pickup chat ibona oku njengendlela efanelekileyo yokwenza imali ngaphandle komzamo omkhulu, kwaye ngenxa yesizathu esihle.Iimodeli ezidumileyo kwiiwebhusayithi zewebhu zifumana imali eninzi ngexesha elifutshane, ngaphandle komzamo omkhulu.Ukwenza oku, kufuneka nje ube sesimweni esihle kwaye uphulule amalungu esini ngokwemvelo kwikhamera yewebhu, ufumane i-orgasm kwikhamera yewebhu, kwaye ngamanye amaxesha kufuneka ugibele kwikhamera yewebhu!
Amantombazana angathintelwanga kunye nabafana kwi-pickup chat roulette 18+
Kubathengi bewebhusayithi ye-RuFreeChats.com, ubukho be-assortment enkulu yabantu abangabonakaliyo abavela kwihlabathi lonke, balungele i-strawberry 18+, phakathi kwayo amantombazana athandekayo awaziyo ukugqiba nge-squirt orgasm, kuthetha ukuba banayo. ukhetho lokuzonwabisa kwabo ngokwesondo.Kwi-roulette yevidiyo yokwabelana ngesondo iya kukwazi ukwanelisa kwanoyena mntu ukhethiweyo, kuba ikwi-intanethi ungabonisa yonke into.
Kwakhona, ukungabikho kwesidingo sokubhalisa ukubukela imiboniso yesondo kunye namantombazana e-pickup kwingxoxo ye-intanethi ayithethi nto ngaphandle kokungabikho kwemfuneko yokufaka idatha yakho naphi na.Oku kuthetha ukuba isayithi inokuqinisekisa ukungaziwa ngokupheleleyo kwababukeli bayo kunye nokhuseleko lwedatha yabo.
Ukuphendula imibuzo eyaziwayo malunga nokuncokola nomntu ongenayo i-random interlocutor
Incoko yokwabelana ngesondo nomntu onxibelelana naye ngokungakhethiyo iyamangalisa kuba awusoze wazi ukuba ngubani oza kuba ngumnxibelelanisi wakho ongathandekiyo.Isayithi liya kunika ngokungaqhelekanga (ngokungaqhelekanga) umntu oqhelekileyo olungele unxibelelwano kwikhamera yewebhu, kuxhomekeke kwisini esikhethiweyo.Ke kuyonwabisa ngakumbi ukukhangela iqabane okanye iqabane onokuthi ube nalo ngesondo ngenyani kwimowudi yomntu omnye.
Kulungile!Oku kongeza kuphela kwi-intrigue yewebhusayithi ngokwayo.Awukwazi ukuba ngubani oza kuba ngumnxibelelanisi, kodwa ukuba kunokwenzeka, unokutshintsha imodeli kwaye ufumane okungakumbi ngokuthanda kwakho.
Yonke into inomdla kwincoko kunye ne-interlocutor engahleliwe!Ukusuka kukhetho lweyona modeli yenyani kunye nokusebenza okuchukumisayo ngokwako.Kodwa, iindwendwe zengxoxo kunye ne-interlocutor engakhethiyo ayisoloko izama ukwenza unxibelelwano lwabo lube lolodwa kwaye lunomdla, konke kuxhomekeke kwimeko ngexesha elinye okanye elinye.
Iimodeli zethu azize zihlangane ebomini bokwenyani, kodwa kwi-roulette yokuxoxa ngesondo ziimodeli ezingezizo ezobuchwephesha zewebhu, ngoko ke iintlanganiso zinokwenzeka ngesivumelwano esifanayo.Ewe kunjalo, amantombazana amaninzi kunye nabafana bakhetha ukuhlala bengaziwa kwaye bathande abaphulaphuli kuphela kwifomathi ebonakalayo.Esi sisiqinisekiso sabo sokhuseleko, kodwa nantoni na inokwenzeka.
- Kufuneka uziphathe ngendlela efanayo kubomi bokwenene nomntu omthandayo, nangona unokwenza ngokuhlukileyo.Akukho censorship kule ngxoxo kwaye ungabonisa yonke into!
👉 Ndidibene nemodeli entle yewebhu kwincoko engacwangciswanga, ndingamfumana njani ngoku ukuze aqhubeke nokuncokola kwikhamera yewebhu?
- Kwiimeko ezinjalo, sinemodi yokukhangela, faka igama lesiteketiso okanye idilesi yekhasi ye-interlocutor okanye i-interlocutor yomdla, khangela kwaye uqhubeke nokunxibelelana ngezihloko ezinomdla kuwe.
- Ngokufanayo nakwabanye, akufanele ufunge kwaye ube krwada.Zama ukuhlonipha zonke iindwendwe ezingakhethiyo eziza kuvela kwimijelo, akukho mfuneko yokubahlazisa okanye ukubathuka!
Incoko ene-Erotic kunye nomntu onxibelelana naye ngokungakhethiyo: i-roulette yabantu abadala (18+)
Kwi-sex ebonakalayo, kusekho inzuzo.Ngelixa udlala kwinkomfa yethu yevidiyo, ungayobeka iketile, utye iipayi ezimbalwa kunye nomsi.
Ukuqhelana ne-masturbation kwi-webcam kwi-erotic chat kunye ne-interlocutors engahleliwe ayizange ibe lula njengoko injalo nathi: i-sex chat roulette 18+ yeyona ndawo ilungileyo kwabo bafuna abasetyhini abafikeleleka ngokulula, amantombazana okanye abafana ngobudlelwane obusondeleyo kwi-intanethi!Ifoto yephonografi yewebhu yewebhu iye yafikeleleka ngakumbi, kwaye amantombazana afumana i-orgasm kwikhamera yewebhu ngokuthe ngqo kwi-intanethi!Mhlawumbi, ngokweemvakalelo zakho, uya kuzithanda zombini, ukuba uyafuna, ungatshintsha nje iincoko.Ewe, eneneni, ukuba kudala unesithukuthezi ngevidiyo elinganisiweyo yesondo,
Ulwazi Lwabazali: Ayilolwabantwana |Imithetho kunye noKhuseleko lweProtocol |UMgaqo-nkqubo weDMCA wokuThobela kunye neeKuki |Ukuthotyelwa kweemfuno ze-accounting 18 USC 2257
Ilungelo lokushicilela © 2022-2022 unyaka.Indawo rufreechats.com yenzelwe kuphela abantu abangaphezu kweminyaka eyi-18!Ukuba uneminyaka engaphantsi kwe-18, ngoko kufuneka ushiye ngokukhawuleza indawo ye-erotic yabantu abadala!
Kutheni i-Chat Roulette ingasebenzi: ukwenza ntoni
Akukho lula ukuphendula ukuba kutheni i-Chat Roulette ingasebenzi.I -World of Accessiqokelele izizathu eziqhelekileyo zeengxaki kwaye yafumana iindlela zokuzisombulula.
Ukunqongophala koqhagamshelo lwe-intanethi okanye isantya soqhagamshelwano esisezantsi sesona sizathu siqhelekileyo sokuba kutheni iChatroulette ingasebenzi.Kuyimfuneko ukujonga isantya soqhagamshelwano kunye nokuzinza kwetshaneli ye-Intanethi
Ukuba umsebenzi wezobugcisa wenziwa kumncedisi, ngoko ukufikelela kwi-Chatroulette kuya kuba nzima - kuyacetyiswa ukuba ulinde ixesha elithile.
Xa iphepha elineRoulette lingavuli, kukho ithuba lokuba liphelelwe lixesha - lifuna ukulayishwa kwakhona.Kuluncedo ukucima i-cache kwibrawuza oyisebenzisayo kwaye uvule kwakhona iphepha.
Ukuba inguqu endala ye-Adobe Flash Player ifakwe kwinkqubo, kufuneka uhlaziye umdlali, ngaphandle koko iRoulette ayiyi kusebenza.Emva kokufaka iFlash Player, kufuneka uqalise kwakhona isikhangeli sakho
Ngokuqhelekileyo ingxaki yokungaphumeleli ilele kwisikhangeli ngokwayo - kufuneka ufikelele kwi-Chatroulette usebenzisa esinye isikhangeli.Rhoqo oku kunceda ukusombulula umbuzo kutheni iChatRoulette ingasebenzi.
Kukho neemeko zokuthintela ukufikelela kwisiza ngumboneleli ngokwawo - ngedilesi ye-IP esetyenzisiweyo.Kufuneka uqalise kwakhona i-router okanye utshintshe idilesi ye-IP usebenzisa i-VPN okanye i-anonymizer
Ukufikelela kwi-Chatroulette kunokuvalwa ngumlawuli wenkqubo - oku kuhlala kwenzeka emsebenzini
Isizathu esinqabileyo sokuba kutheni i-Chat Roulette ingalayishi kubukho beentsholongwane kwinkqubo.Ukusombulula le ngxaki, kufuneka uqhube iskena emva kokukhuphela isoftware ye-antivirus.Eyona ndlela isebenzayo yokulwa neentsholongwane yiKaspersky Anti-Virus.
Kutheni kukho isikrini esimnyama kwi-Chatroulette
Ukuba kukho ifestile emnyama ekhohlo kwincoko yevidiyo, sijonga izizathu ezininzi.Malunga nabo - ngakumbi.
Ikhamera yewebhu ayiqhagamshelwanga- kufuneka uqinisekise ukuba isebenza ngokuchanekileyo.Ukufaka kwakhona kunye nokuhlaziya abaqhubi kuyanceda.
Ukuba i-Chatroulette ayiboni ikhamera yewebhu edibeneyo, kufuneka ukhangele iinkqubo ezinokuyisebenzisa okwangoku.Kufuneka zigqitywe - ukuba akukabikho mfanekiso kwi-ChatRoulette, ngoko ke, kunokwenzeka ukuba, ikhamera yewebhu ayisebenzi.
Ngokubanzi, ngaphambi kokuba uqalise i-ChatRoulette, kufuneka uhlale uvala zonke iithebhu zebrawuza, ngaphandle kwethebhu eneRoulette ngokwayo.
Ngokuqhelekileyo ikhamera yewebhu isebenza ngokuchanekileyo, kodwa ayiboneleli ngomfanekiso kwi-Chatroulette.Ukulungisa ingxaki, kufuneka utshintshe i-ID yale khamera yewebhu.Kulula ukwenza - zininzi iinkqubo zokuvula, umzekelo: http://anti-banner.com/
Incoko yevidiyo isebenzisa i-flash player.Ukuba iphelelwe lixesha, ke iChatroulette ayizukusebenza nayo.Umdlali kufuneka ahlaziywe kuguqulelo lwamva nje.
Umbuzo wokuba kutheni i-Chat Roulette ingasebenzi kunokwenzeka ukuba isonjululwe.Ukuba akunjalo, phinda yonke inkqubo echazwe ngasentla.
Kutheni kukho ifestile emnyama ngasekunene kwi-Chatroulette
Izizathu zokuba kutheni ifestile ye-interlocutor imnyama:
Enye yeewebcams ayisebenzi;
Uxhulumaniso olukhawulezayo lusetyenziswa - umfanekiso ufika emva kwexesha kwaye isikrini esimnyama sivela kwisikrini;
Izicelo ezongezelelweyo ziyasebenza - zidla i-traffic kwaye zinciphisa isantya.
Kutheni iChatroulette iba ngumkhenkce
Ukuba i-chatroulette iyabanda, kufuneka uvule "uMphathi woMsebenzi" kwaye ujonge ukuba ixakeke kangakanani i-CPU.
Ukuba iChatroulette isebenza kancinane, unokuba neethebhu ezininzi zebrawuza ezivuliweyo okanye iinkqubo zivuliwe.Kuyacetyiswa ukuba uzivale kwaye uqale kabusha ikhompyuter yakho.Emva koko unokuvula iChatroulette kwakhona
Incoko yevidiyo iya kusebenza kuphela ngesantya esiphezulu se-Intanethi, kuya kufuneka uhlaziye isikhangeli sakho.Kungcono ukusebenzisa izikhangeli ezithembekileyo, ezinje ngeGoogle Chrome.Oku kusombulula ingxaki kutheni Chat Roulette ayisebenzi.